माधव नेपालको अन्तर्वार्ता: एकै व्यक्ति पार्टीमा लगातार पद अाेगटेर बस्नु ठिक हुँदैन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more माधव नेपालको अन्तर्वार्ता: एकै व्यक्ति पार्टीमा लगातार पद अाेगटेर बस्नु ठिक हुँदैन
माधव नेपालको अन्तर्वार्ता: एकै व्यक्ति पार्टीमा लगातार पद अाेगटेर बस्नु ठिक हुँदैन
पुस २३ गते, २०७४ - ०७:५७
काठमाडौं । ‘समय’ प्रति निकै सचेत नेतामा गनिन्छन्, माधवकुमार नेपाल । तर चुनाव सकिएको एक महिना बित्दा पनि नयाँ सरकारको खाका कोर्ने माहोल नबन्दा उनी निकै ‘असन्तुष्ट’ मुद्रामा देखिन्थे । ‘कतै षड्यन्त्र हुँदै छैन ?’ उनको आशंका थियो ।
वाम गठबन्धन ‘कसिलो’ भएको र तोडिनेहरु नै फस्ने तर्क नेता नेपालको छ । नेपालसँग कुराकानी गरिरहँदा लाग्थ्यो, उनलाई एमाले–माओवादी एकता, शासकीय संरचनाको भावी खाकाका विषयमा भएका ‘वार्ता’ मा संलग्न गराइएको छैन । त्यही कारण उनले पटक–पटक जवाफ दिए, ‘दुई नेताबीच राम्रै छलफल भइरहेको होला ।’ समानुपातिक चुनाव परिणाम घोषणामा भएको ढिलाइ, भावी सरकारको खाका, वाम एकताबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालकाे अाजकाे कान्तिपुरमा अन्तरवार्ता छापिएकाे छ ।
निर्वाचन आयोगलाई यस्तो काम गर्न कसैले उक्साएको हो भन्ने तपार्इंहरूको आशंका हो  ?
माओवादीका मन्त्रीहरूले कि त त्यहाँ यो काम गर्न मिल्दैन भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष टेबुल ठोक्नुपर्‍यो, होइन भने किन बसिरहने  ?
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पदृष्टि भएको व्यक्ति हुनुहुन्न । कांग्रेसको अफर ललिपप हो भनेर बुझ्न सक्नहुन्छ ।
कसैले केही कमजोरी खोजिरहेका होलान्, त्यसैले तोड्छांै भनेका होलान् । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने कोसिस भइरहेको होला तर पनि गठबन्धन कसिलो छ ।
परिणाम घोषणा रोक्न त्यस्तो काम गर्ने सवाल नै आउँदैन । कुन मितिसम्म कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब–किताब हामी पनि गर्न सक्छांै । राज्य सञ्चालनमा हाम्रो पनि अनुभव छ ।
यसका निम्ति छलफल गरी दुवै पक्ष मिलेर जानेखालकोमाहोल बनाउनुपथ्र्याे । पारदर्शी ढंगले छलफल गरेर जाऔंं भन्न सकिन्थ्यो तर शंका–आशंका उत्पन्न हुने ढंगले किन काम गरिरहेको ? संविधानमा यस्तो छ, के गरौं भनी ठूलो दल एमालेसँग छलफल गर्ने हो तर यहाँ अन्य सबै दललाई बोलाएर औपचारिकता पूरा गर्ने ढंगले मात्र अघि बढ्न खोजेर हुन्छ ? पहिले त जहाँ समस्या छ, त्यहाँ पो केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । हामीसँग कुरै नगर्ने, वास्तै नगर्ने ?
त्यसो भए तपाईंहरूबीचकै छलफल पारदर्शर्ी छैन ?
ममा क्षमता छ/छैन भन्नेमा मैले गीत गाएर हँु‘दैन । मेरो भूमिका, आवश्यक योग्यता, क्षमता, अनुभवले काम गर्छ भने अवश्य पनि कहीं मेरो खोजी हुन्छ । मैले किन चिन्ता गर्नु ?
चुनावका बेला अनुचित काम नहोस् भनेर राखिएको होला । त्यो त्यतिबेला ठीकै पनि थियो तर अब माओवादीका मन्त्रीहरू सरकारमा रहनु हँ‘ुदैन । कि त त्यहाँ यो काम गर्न मिल्दैन भनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष टेबुल ठोक्नुपर्‍यो, होइन भने किन बसिरहने ?
यसमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको हित र एकता, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका पक्षमा हुने विषय छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । हामी तयार पनि छांै ।
राष्ट्रनिर्माणका काममा उहाँहरूले अवरोध, बाधा खडा गर्नु हुँदैन, सहयोगी भूमिका खेलिदिनुपर्छ ।
पुस २३ गते, २०७४ - ०७:५७ मा प्रकाशित